१० महिनाको दुधे नानी र अपाङ्ग श्रीमानलाई छोडेर श्रीमती अर्कैसंग फरार, बच्चाको बिचल्ली (भिडियो) – Sanjal Nepal
Homeसमाचार१० महिनाको दुधे नानी र अपाङ्ग श्रीमानलाई छोडेर श्रीमती अर्कैसंग फरार, बच्चाको बिचल्ली (भिडियो)
November 2, 2020 admin समाचार 6786
उमेश तामाङ नामका यि युवाको श्रीमती अहिले फरार छिन ।
बिहे गरेको २ बर्ष पछि १० महिने नानी छाडेर सारा सम्पती लिएर कहा गईन भन्ने अतोपतो छैन । सम्पतीको नाममा भएको अपांग भता र गिलाश भाडाकुडा जस्ता सबै सामान लिएर अहिले कुलेलाम ठोकेकी छिन ।
बिहे गर्ने बेला अपांग श्रीमान छ भन्दाभन्दै थाहा पाउदा पनि बिहे गरेकी यिनी अहिले कहा गईन कोस“ग किन गईन ? भन्ने कुरा थाहा नपाउदा श्रीमान भक्कानिन्छन भने नानीले मम्मी बुबु भन्दा झन आशु झर्छ आखाबाट, भिडियो:
कोरोनादेखि यती घातक रोगको औषधि गुर्जो ? गुर्जोका फाईदै फाईदाहरु (भिडियो सहित)
सामाजिक अभियन्ता शरिन तामाङ्ग,इशा गुरुङ्ग,डेबिट सुब्बाले यसरी बचाए सिताराम बि.क लाइ भिडियो हेर्नुहोस !
November 26, 2020 admin समाचार 1829
विवाहलाई रोचक र विशेष बनाउनका लागि यि जोडीले कपडा नलगाइ विवाह सम्पन्न गरे.,कसैले थाहै पाएनन् एजेन्सी : विवाह एउटा पवित्र बन्धन हो । विवाह बेहुला र बेहुलीको विशेष मान्ने गरिन्छ । विवाहलाई झनै रोचक र
November 9, 2020 admin समाचार 3352
November 21, 2020 admin समाचार 3321
काठमाडौं : ५८ वर्षीय गोपाल परियार खुला मञ्चमा बाँडेको खानामा निर्भर हुन थालेको ४ महिना भयो। यही खानाकै भरमा सास धानिरहेको उनी सुनाउँछन्। ‘यहाँ खाना नपाएको भए त म मर्थेँ हजुर’ गोपाल दुखेसो पोख्छन्। उनी
LEX 18 agenda conversation: Job club (541169)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (511691)
Hello world! (433341)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (395898)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (104073)